भारतीय हस्तक्षेपले नेपाल र नेपालीको अस्तित्व खतरामा – Chitwan Post
भारतीय हस्तक्षेपले नेपाल र नेपालीको अस्तित्व खतरामा
नेपालको इतिहासलाई हेर्दा राणाशासनपछि ६९ वर्ष बिते । राणा छँदै नेहरूले नेपालको घाँटीमा पासो लगाइदिए, त्यसलाई भनिन्छ– ‘नेपाल–भारतको असमान सन्धि ।’ तीन–चार वर्षदेखि नेपाल–भारतको सम्बन्ध सुधार्न प्रबुद्ध समूहको समिति बनेको छ । चार जनाको दुवै देशको आआफ्ना टोली (समूह) छ । थाहा छैन, यो समितिले केकस्ता बुँदाहरुमा अर्थ भरेको छ । मुख्य बुँदाका रुपमा असमान सन्धि नेपालमाथिको पासो तोड्न भारतले त मन्जुर गरेको छ भनिएको छ । चार वर्ष लगाएर पसिना बगाएको यो समितिले आआप्mनो सरकारलाई बुझाइसकेको विषय भारतले चुपचाप थन्क्याएर राखेको छ । दुवै देशवासी बसी टुङ्गो लगाउने काम अलपत्र छ ।
भारतमा विसं २००५ सालसम्म अङ्ग्रेजको सरकार थियो । अङ्ग्रेजले २०० वर्षसम्म राज ग¥यो भारतमा । अङ्ग्रेज (गोरा) ले सकेको भए नेपाल भारतमा मिलाउँथ्यो । लडाइँ पनि भयो संसारकै शक्तिशाली अङ्ग्रेजसँग नेपालको । उसले खान नसक्नाले सम्झौता गर्न मन्जुर भयो । यो सन्धि ‘सुगौली सन्धि’ नामले प्रसिद्ध छ । नेपाल–भारत युद्ध भएर १८१६ मा सुगौली सन्धि भएको हो । भविष्यद्रष्टा नेपालका महापुरूषहरुको दूरदर्शिता नभएको भए हामी नेपाली कहलिन्थ्यौँ ? धन्नै एक तिहाइ भूमि गुमाएर पनि हामीले गरिखाने विश्वकै मह¤वपूर्ण भूमि सगरमाथाको देश ‘नेपाल’ हामीसँग छ ।
सुगौली सन्धिमा डेढ सय वर्षसम्म अङ्ग्रेजको खासै हस्तक्षेप भएन भन्न मिल्छ । परचक्रीको पैँतलाको धूलो चाट्न नपाएपछि रिस भारतले एउटा कमजोर र निर्बलियो छिमेकीमाथि गर्नै नहुने र नपर्ने दुःख, कष्ट निरन्तर दिँदै आयो । त्यति बेलाका राजा त्रिभुवनलाई नेपालमा त पठाइयो, तर भारतीय आठपहरियाहरुको नियतिले छोडेन । त्रिभुवनलाई घेराबन्दी गर्दै रहे । भनौँ, राजा भारतकै नियुक्ति थियो । नेहरू नौ सालमा नेपाल आए, नेपालको काठमाडौँबाट घोषणा गरे– हाम्रो भारतको सिमाना त्यो सेतो हिमाल हो, त्यो सिमाना त नेपालले न चीनले हलचल गर्न सक्छ ।’ त्यो बेलाको नेहरू डट्रिन आजपर्यन्त कायमै छ ।
नेहरूले नेपालको २५ जिल्लाको चीन–नेपाल सिमानामा उसको सेना तैनाथ ग¥यो । १० सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछि कोसी सम्झौता भयो । गौदानको गाई चोख्याएर फेरि देशैलाई दान दिएजस्तै नेपाललाई देखावटी ५–७ प्रतिशत सहयोग दिएजस्तो गरी सिङ्गो पानी भारतले लग्यो । भारतको बाँध थुनिएर २०६४ सालमा फ्क्कै घरैमा नेपाली बगे । नेपाल बग्यो । आजसम्म ती पीडित नाङ्गै (सहायताबिना) तड्पिरहेका छन् । त्यो सन्धि कति वर्षको हो ? त्यसबाट नेपालले कति मुनाफा पाउँछ ? सन्धि भन्ने कुरा स्थायी हुँदैन, तर कोसीको नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन ? आज ६५/६६ वर्षसम्म नेपाली जनताले त्यसको जानकारी पाएका छन् कि छैनन् ? पाउनुपर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ कि हुँदैन ? कुनै कुरा सुन्नमा आएको छैन ।
कोसी नदीलाई उल्टै बाँध बाँधेर पूर्वका जिल्लाहरु डुब्ने गरी ३०० मिटर अग्लो बाँध बाँधी १४ अर्ब घनमिटर पानी जम्ने ताल बनाई नेपाली भूमि सुख्खा राखी पानी भारत लाने सन्धिमा नेताहरुले मन्जुर भएर सही गरिसकेका छन् । बहाव कमजोर हुने हुँदा निश्चित नै यो ताल फुट्छ । ताल फुट्दा सगरमाथाको फेदीदेखि धेरै पहाड बग्नेछ र सखापै हुने हुँदा आफैँ बग्नुको साटो त्यो सन्धि नै नगर्नलाई पूर्वका युवकहरुले ढुङ्गामुढा गरी लखेट्छन् । तर, भारतलाई नचिढाउन सरकारमा बस्ने जुनसुकै सरकारले पनि सेना लगाएरै भए पनि त्यो कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ ।
विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २०१५ सालको आमचुनावमा दुई तिहाइको विजय भएपछि पहिलो कदममा नदी नै अघि सारे । मातृकाले जस्तै बीपीले पनि २०१६ सालमा गण्डकी (नारायणी) नदी भारतलाई सुम्पे । कति अवधिलाई दिएका हुन् ? नेपाललाई लाभ कति छ ? नवीकरण हुन्छ कि हुँदैन ? सदाका लागि हो कि कहिले फर्कने हो ? चितवन जिल्ला र नवलपुरवासीहरु सधैँ दुःखी र पीडित बन्नुपर्ने हो कि के हो ? जनताले जान्नुपर्ने हकअधिकार छ कि छैन ? आफ्ना नदीनाला र पानी अर्कालाई, आपूm व्यापार घाटामा बस्नुपर्ने । यसबाट मुक्ति मिल्ने कि नमिल्ने जनतामा जानकारी कसले दिन्छ ?
कोसी र गण्डकीको अमूक खेलबाट नेपाली जनताको हकअधिकार प्रयोजन जनता नै चेतनशील र अघि सर्ने सामथ्र्य नबनेसम्म यो रहस्यकै गाँठो कसिइराख्ने देखिन्छ । २०५२ सालमा आधा पानी, आधा आम्दानीको हर्षबढाइँ गरेर भएको सम्झौताको महाकालीका नायकहरुले नेपाली जनताहरुलाई कहिल्यै जवाफ नदिएर बस्न अलिकति पनि धक लाग्दैन ? नेपाली जनताको अगाडि नाक ठाडो गर्न कसरी सकेको ? यो अचम्मैको कुरा हो ! “बोल न बोल, नेपाली सन्तान बोल ।”
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुअघिकै कुरा होला सायद् ! नेपाल सरकारले एउटा पत्र पठायो । पत्रको कुरो नेपालको जलस्रोतसम्बन्धी थियो । नेपालको पानी के गरेर प्रयोगमा ल्याउने, तपाईंहरुको विचार कस्तो छ ? त्यो विचारविमर्श सुन्न पाऊँ भनी लेखिएको थियो । चार वर्षपछि भारतले जवाफ दियो । राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्रीले पत्रको कुनै उपचार लाग्छ कि भनी गुम राखिन् । निचोड ननिस्केपछि पत्र सरकारको मातहत बुझाइन् । पत्रमा भारतको सल्लाह र विमर्श थियो, नेपालको सिङ्गो पानी भारतले लिने । त्यो पानी नेपाललाई चाहिएको बखतमा पनि भारतकै तजबिजले दिने । कतै कसैलाई पनि भारतकै अख्तियारीबाट सञ्चालन गर्ने । यो चरण (नाङ्गो)मा उपदेशलाई स्वीकार्न त कसरी सक्दा हुन् र तैपनि त्यो इच्छा र दाबी कतै बांगोटिंगो त छैन ?
त्यसैवरिपरि अपर कर्णालीको सल्लाह, विमर्श चल्दै थियो । अपर कर्णाली विश्वमै नपाइने विद्युत् परियोजनाको विषय थियो । नेपाली जनता आफैँले निर्माण गर्न असाध्यै प्रयास गर्दा सुशील कोइरालाले नेपाललाई आँखै लगाएनन् । राधा ज्ञवालीसँग सल्लाह लिएर ऊर्जा व्यापारको गफ देखाएर नेपालीलाई यता १६ घन्टासम्मको लोडसेडिङ थियो त्यतिबेला । ऊर्जा व्यापारको धाक नेपाली मानसपटलमा तेस्र्याएर एउटा भारतीय कम्पनी जीएनआर लाई सौँपिइयो । ऊर्जा व्यापारै भए पनि अहिलेसम्म १०–१२ वर्षको व्यापार घाटालाई सहयोग पुग्दो हो । नेपालको पानी भारतलाई कब्जा दिनुपर्ने कांग्रेसी मनस्थिति, नदिएसम्म के मन मान्थ्यो र ! चार ठूला नदीबाट भारतका युपी र बिहार त मालामालै भए । आफ्नो पानी किन र कसरी विदेशीलाई चढाएका छन्, न देश न जनतामा पारदर्शी छ यसतर्फ । यस्तो जलस्रोत चढाउने एउटा गरिब राष्ट्र ११–१२ वर्ष व्यापार घाटामा भन्ने समाचार सुन्नु परिरहँदा संवेदनशील नेपालीको मन कति हुँडलिएर आउँछ ! तर, देश र जनताको जिम्मा लिने कसम खाने जुनसुकै नेता, जुनसुकै दल पनि एक शब्द कहिल्यै उच्चारणै नगरी धुकधुकीको जीवन बाँचिरहँदा यस देशमा जन्मेहुर्केका, दानापानी खाएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको ब्युँतिने दिन कहिल्यै नजाग्ने किन त !
ठूला नदीको मात्र प्रश्न होइन, दशकौँदेखि हरेक नदीका खण्ड–खण्ड गरी कमिसन खानकै लागि भारतलाई चढाउँदै आएका, तर सधैँ अन्धकारबाट उज्यालो पार्नेतिर सोचै नराख्नेहरु को–को हुन् ? तिनले यसको जिम्मेवारी लिन किन नपर्ने ? हुँदाहुँदै एउटा व्यक्ति जो अहिले दुई तिहाइको नेतृत्व गरिरहेका छन्, उनी यो ठाउँमा विराजमान हुने अवसरको मुहूर्त कसरी बन्यो ? त्यसतर्फ ध्यान र सोच बिर्सेर जसले पाँच महिना नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दीमा बन्दी बनाएर अपराध ग¥यो, उसैलाई खुसी पार्न नेतृत्वको सबै मेलोमेसो छोडेर नदी नै उद्घाटन गर्न हस्याङफस्याङ गरे, त्यो पनि पानीसमेत विदेशै पु¥याउने सर्तमा । योभन्दा नेपालीको दुर्दशा अरु के हुन सक्छ ! खोइ नेपालीपन नेताहरुको ? देश र जनताप्रतिको चिन्ताबिना देशले मुहार फेर्ने कसरी ! त्यो दुई प्रधानमन्त्रीको एउटै हात बनाएर दिएको पानी अब अर्कै कम्पनीको जिम्मा लाइसके मोदीले ।
यसरी पानी कब्जा गर्ने भारतको उद्देश्य पूरा गर्दै जाने क्रममा ७ वैशाख बिहानको रेडियो समाचार आयो– भारतलाई खानेपानीको समस्या भयो । नेपालको पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । १५ प्रतिशत पानी नेपाललाई चाहिन्छ, ८५ प्रतिशत पानी भारतलाई दिने व्यवस्था गर्नुप¥यो । १० वर्षअघिको सिङ्गै नेपालको पानीको दाबी फेरि पनि दोहो¥याइएको छ । सिङ्गै पानी भारतको कब्जामा हुने दाबी गरेर, निर्लज्ज हाम्रा नेताहरुलाई गलाएर नेपालको पानी कब्जा गरेरै छाड्ने प्रयास खतरनाक छ । होसियार बन नेपाली सन्तान ! नेपाल एकदिन खाएर सन्तोषको सास लिने दाउ तबसम्म भारतले त्याग्दैन जबसम्म आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्दैन ।
पानीबिनाको देश बन्नै सक्दैन । मरूभूमि त्यसलाई भनिन्छ जहाँ पानी हुँदैन । भारतको हात परेको चीज फिर्ता हुँदैन । लेण्डुपेजस्ता राष्ट्रदोहीहरुले सिक्किम बेचे । अहिले लेन्डुपेको चिहानलाई सिक्किमेली जनताले नथुकी बाटो काट्दैनन् भनिन्छ । नेपाल त्यो अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिन्न, किनभने हाम्रा नेता भारतलाई खुसी पार्नु नै आपूm नेपाली भएको सार ठान्छन् । हाम्रा नदीनाला, हाम्रा अतिक्रमित भूमिसम्बन्धी एक शब्द बोलेको एउटामात्र नेपालीले सुनेको कोही छन् यहाँ ? को भन्न सक्छ, नेपाली नेताले आफ्नो गुमेको सम्पत्तिको निम्ति एक शब्द उच्चारण गरेको सुन्न पाऊँ प्रभु !
जो मान्छे आफ्नो निम्ति पनि बोल्ने साहस गर्न सक्दैन, उसको जन्म नै धिक्कार छ ! किन डर बोल्नलाई र आफ्नो हक दाबी गर्नलाई ? जब कि, उसले गर्ने नगरी छोड्दैन । नेहरू डट्रिङ नेपालको निम्ति लागू गरेरै गए । त्यो आजसम्म लागू नै छ । नेपालमा महेन्द्र शाहले राजगद्दी चढ्ने पालो नपाएको भए आज हामीले आफ्नो देश नेपाल भन्न नपाउने प्रमाण त्यतिबेलाबाट जीवित सबैले देखेजानेकै हो । राजा त्रिभुवन नेपाल दरबारमा नै भारतीय कब्जामा थिए । २५ जिल्लामा भारतीय सेना हटाउने महेन्द्रको पालाका कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री दुई वर्षअघिसम्म जीवितै थिए । कालापानीसम्बन्धी दार्चुला जिल्लाको कुरा मलाई बताएनन्, नत्र २५ जिल्लासँगै कालापानी पनि सल्टिने थियो– कीर्तिनिधिको भनाइ थियो । त्यस्तै, राजीव गान्धीले वीरेन्द्रको शासनसँग आफ्नो अधीनस्थ सेना वा परराष्ट्र विभाग माग्दा नदिएको कारण १८ महिना नाकाबन्दी गरे । मरीचमान श्रेष्ठले राजालाई रिपोर्ट दिन्थे । इन्दिरा गान्धीको तराई भित्र्याउने व्यवस्थाअन्तर्गतको निर्देशन थियो भने कुरा प्रचारमा ल्याउने ‘र’ को सदस्य जीवितै छन् । संविधान आपूmले बनाउन नपाउँदा पाँच महिना नाकाबन्दी लगाउने नरेन्द्र मोदी अब दोस्रोपल्ट भारतका प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।
कालापानी, सुस्ता, महेशपुर अतिक्रमित छँदैछन् । लिपुलेक अस्ति भर्खर खल्तीमा हाल्ने जल्दाबल्दा प्रधानमन्त्री मोदीलाई कमजोरीस्वरुप बिन्ती चढाई राखी बसेकै छन् । तिम्रो अनुमतिबिना हामी चीन जान्नौँ भन्ने वाचाकबोल हाम्रा नेतागणले पालना गरिबसेकै छन् । यता ११–१२ अर्ब व्यापार घाटा बेहोर्दैछन् भने उता कुनै पनि वस्तु नेपालबाट भारत जान थालेपछि एउटा न एउटा अंकुश लगाउने र अवरोध लगाई बन्द गरिहाल्छन् । जस्तोः गलैंँचा लेडलर ल्याउन २–३ वर्ष चुरीफुरी गर्दैगर्दा के–के न के मिस्कट गर्ने जस्तैः कैफियत गरी गलैँचा ठप्पै पारिदियो । डाल्डा घिउ, मैदा, गोलभेँडा, अदुवा, अलैँची कुनै पनि वस्तु भारत भएर वा भारत जान थाल्यो र नेपालमा फैलियो भने त्यो खुम्चिहाल्छ । यसको अर्थ हो– नेपाल स्वतःस्फूर्त चल्ने, बाँच्ने अधिकारै छैन भारतको नियन्त्रणबाहिर । न उँभो, न उँधो यो देश उसको इच्छामा बाँच्नुपर्ने अवस्था हो । चीनतर्फको नाका उत्तरको समुद्री बाटो पनि उसैको तजबीजमै मान्नुपर्छ, तर अत्यन्त मायामा हुर्किएका, पालिएका यहाँका नेतामा त्यो माया र दयाभन्दा अघि बढ्ने क्षमता छैन ।
यत्राविधि अझै ७०–८० ठाउँको अतिक्रमण छँदैछ । यस्तो अवस्थामा पनि थप के आईपर्ने यिनलाई त्रास ! त्यसैले, जबसम्म आपूm बाँच्न र जीवन फस्टाउन आफ्नै क्षमतामा आँट नगरे नेपाली जनजीवन योभन्दा अघि बढ्ने युक्ति छैन । नेपाली सम्पूर्णले यस कुरालाई मनन गर्न र नेतृत्वलाई साहस र आँट नदिलाए गुलामी जुनीबाट हामीले मुक्ति पाउँदैनौँ । आजसम्मको भोगाइले हामी अनभिज्ञ छैनौँ । हाम्रो घैँटोमा घाम लागोस् !
धन र सत्ता हस्तान्तरण
प्रकृतिलाई माया गरौँ